आँखाको एलर्जीबाट बच्न डा‍. ढुंगेलले दिएका सुझाव – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Health/आँखाको एलर्जीबाट बच्न डा‍. ढुंगेलले दिएका सुझाव
आँखाको एलर्जीबाट बच्न डा‍. ढुंगेलले दिएका सुझाव
काठमाडौं– चिसो मौसम शुरु भएसँगै सडक तथा बाटोमा धुँवाधुलो निकै बढेको छ । धुँवाधुलो र प्रदुषित वातावरणले मानव स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्छ । त्यतिमात्र होइन धुँलोका कारण आँखा सम्बन्धि समस्या पनि बढ्दै गएको छ ।
धुँलोधुँवाको कारण आँखामा एलर्जीको समस्या बढ्दै गएको नेपाल आँखा अस्पतालका नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर इन्दुप्रसाद ढुंगेलले बताए ।
‘काठमाडौंको वातावरणमा धेरै हानिकारक धुँवाधुलो उड्छ, जसले गर्दा आँखामा एलर्जी हुने समस्या छ। बढ्दै गएको छ,’ डा ढुंगेलले भने, ‘एलर्जी हुने समस्या भएका व्यक्तिले बाहिर हिड्दा आँखाको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।’
कसरी थाहा पाउँने एलर्जी र अन्य समस्या ?
डा.ढुंगेलका अनुसार चिसोकै कारण समस्या भएको भन्दै बिरामीहरु नआएपनि चिसो मौसममा आँखा पाक्ने, आँखा रातो हुने, चिलाउने लगायतको समस्याका बिरामीहरु उपचारका लागि आउँछन् । आँखामा एलर्जी ब्याक्टेरिया वा वातावरणको कारण हुन्छ ।
‘एलर्जीका कारण हो वा रोग हो भनेर जाँच गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ, एलर्जीको समस्या बाह्रै महिना देखिन्छ, साधारण आँखा पाक्ने र एलर्जीको समस्या लक्षणहरु भने फरक हुन्छ,’ डा ढुंगेलले खबरहबसँग भने, ‘लक्षणकै आधारमा एलर्जी वा अन्य रोग हो भनेर थाहा हुन्छ ।’
डा‍. ढुंगेलका अनुसार आँखामा हुने एलर्जीको लक्षण यस्तो छ
–आँखाको वरिपरिको भाग सुन्निने,
–आँखाबाट आँसु बढी आउँछ,
– घाममा हेर्न नसक्ने,
–आँखा रातो हुने,
– आँखा पोल्ने,
–उज्यालोमा हेर्न नसक्ने ।
आँखामा हुने एजर्ली दुई किसिमको हुने डा.ढुंगेल बताउँछन् । ‘आँखामा एलर्जी हुने कारण दुई खालको हुन्छ, एउटा सिजनल हुन्छ भने अर्को पेरिनेल भन्ने हुन्छ,’ डा. ढुंगेलले भने, ‘सिजनल चाँहि मौसम परिवर्तनको समयमा हुन्छ भने पेरिनेल भनेको बाह्रै महिना हुन्छ ।’
आँखामा एलर्जी हुने कारण
शरीरमा हुने एलर्जी
कुनै व्यक्तिमा हरेक समयमा हाच्छिउ आउने, नाकबाट पानी बग्ने समस्या छ भने आँखाको पनि एलर्जी हुन्छ ।
छाला सम्बन्धि समस्या वा एलर्जीले पनि आँखामा एलर्जी हुन्छ । जसलाई एक्जिमा भनिन्छ ।
घर भित्रको धुँवाधुलो
घर भित्र हुने धुँवाधुलोमा स–सामा माइट नाम गरेका किटाणु हुन्छ । त्यसले एलर्जी बढी हुन्छ ।
धेरै मानिसलाई जनावर कुकुर, बिरालो, खरायो पाल्ने सोख हुन्छ । विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा यस्ता जनावरलाई परिवारकै सदस्यको रुपमा लिएर काखमै राखेमा स्याहार गर्नेहरु पनि हुन्छन् ।
जसले गर्दा जनावरहरुबाट किटाणुहरु सरेर मानिसमा पनि एलर्जी हुने सम्भावना रहन्छ । शहरी क्षेत्रका कुकुर, बिरालो पाल्ने व्यक्तिमा आँखामा एलर्जी हुने समस्या देखिने सम्भावना बढी रहेको डा‍. ढुंगेलको भनाइ छ ।
–घरमा हुने कार्पेटको धुँलो, भान्साबाट निश्किने धुँलो तथा ढुसीले पनि आँखामा एलर्जी गराउँछ । जसलाई चिकित्सकहरु मोल्ड फंगस भन्छन् ।
नयाँ पालुवा वा फूल फुल्ने समयमा फूलमा हुने कणहरुले पनि एलर्जी हुन्छ ।
घरबाहिर अर्थात सडकको धुलो
काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने धुँलोधुवा छन् । जसको कारण मानिसको आँखामा एलर्जीको समस्या बढ्दै गएको छ । काठमाडौंको प्रदुषित वातावरणले पनि आँखामा एलर्जी बढिरहेको छ ।
कसरी साबधानी अपनाउने ?
एलर्जीको समस्या लिएर आउने बिरामीको एलर्जी कम गराउन तत्कालिन रुपमा औषधि प्रयोग गरेपछि एलर्जीबाट सधैका लागि बच्न भने एलर्जी हुने कारणबाट नै बच्नुपर्ने डा ढुंगेल बताउँछन् ।
‘एलर्जीको समस्या लिएर आउने बिरामीको ब्याक्टेरियल समस्या छ भने त हामीले त्यहि अनुसारको औषधि उपचार गछौं, तर वातावरणको कारण एलर्जी छ भने चाहि प्रिभेन्सनलाई बढी जोड दिनुपर्छ ।’
एलर्जीबाट कसरी बच्ने
–घरको भान्सा तथा विस्तारामा ढुसी पलाउन नदिने,
–घर सफा गर्दा आँखामा चस्माको प्रयोग गर्ने,
–घर सफा गर्दा पानी छर्केछ धुँलो उड्न नदिइ सफा गर्ने,
– धुँलोधुवामा नहिड्ने,
–धुँलोधुवा भएको वातावरणमा हिड्दै परे चस्मा प्रयोग गर्ने,
–सकेसम्म जनावरहरुलाई आफ्नो नजिक नराख्ने,
–एलर्जी हुने मानिसले कोठामा धुँलो आउन नदिने गरी झ्याल ढोका बन्द गरेर बस्ने,
–एलर्जीको समस्या हुने व्यक्ति रुख बिरुवाको वरिपरि नबस्ने ।